Dhammaan Beddelka Turbotax ee 2022? Isbarbar dhigyada Bixinta Degdegga ah -
Bogga ugu weyn Dhammaan Beddelka Turbotax ee 2022? Isbarbar Dhigyada Degdegga ah
Isha sawirka: goodfinancialcents.com
Waxaa laga yaabaa inay run tahay Intuit's Turbotax oo dadku u adeegsadaan sanado badan si ay u bixiyaan canshuuraha ay keenaan dhibaatooyin. Tani ma kaa dhigaysaa mid aan jeclayn TurboTax? Nasiib wanaag, waxaa jira ikhtiyaarro kale oo lacag la'aan ah oo aad isticmaali karto si aad u bixiso canshuuraha aan qaadin dhibaatooyinka TurboTax.
Software -kan beddelka ah ee aad u adeegsan karto inaad ku bixiso canshuur, wuxuu bixiyaa adeegyada ugu fiican ee aad waligaa ku fikiri karto. Miyaad rabtaa inaad la kulanto habab cusub oo lagu bixiyo canshuurahaaga? Hadday haa tahay, waxaan diyaarinnay beddelka ugu fiican TurboTax. Qaar ka mid ah beddelaadyadan waa kuwo la awoodi karo (haddii aysan ahayn bilaash).
Sahan dhowaan la sameeyay, cabashooyinka dadka ayaa muujinaya in barnaamijka TurboTax uu leeyahay maqaallo dhowr ah oo ka hadlaya mawduuca. Tani waxay dadka ku hakinaysaa haddii maqaallada dib loo eegay.
Intaa waxaa dheer, qiimuhu si lama filaan ah ayuu u kordhaa marka aad u malaynayso inay hoos u dhacayso. Markay taasi dhacdo, waa inaad kor ugu qaaddaa qiime aad qaali u ah kala badh cashuurtaada ama dhammaadka.
Waxyaalahaas oo dhan awgood, dadka badankood waxay hadda u muuqdaan inay neceb yihiin barnaamijka Intuit's TurboTax kaas oo la adeegsanayey ilaa bartamihii-80-meeyadii. Waxay hadda raadinayaan beddelaad ay ku bixiyaan canshuuro aan ahayn TurboTax.
Jadwalka tusmada hoose wuxuu muujinayaa dulucda maqaalkan.
TurboTax waa codsi softiweer oo loo isticmaalo diyaarinta canshuur celinta dakhliga Mareykanka. Software -kan waxaa soo saaray Intuit Inc waana kan ugu horreeya madal bixinta canshuurta.
Sida laga soo xigtay warbixintii 2016, TurboTax waxay ku bixisay $ 2 milyan olole ka dhan ah IRS iyada oo abuurtay nidaamkeeda internetka ee canshuur buuxinta.
Qeyb ka mid ah heshiiska u dhexeeya TurboTax iyo IRS waxay u oggolaaneysaa shaqsiyaadka sameeya wax ka yar $ 66,000 sanadkii inay adeegsadaan nooca TurboTax ee bilaashka ah.
Software -ku wuxuu leeyahay nooc bilaash ah oo adeegsadayaasha aan iska diiwaangelin canshuuraha ama damacsan inay qaataan wax dhibco ah ay isticmaali karaan. Si kastaba ha noqotee, TurboTax waxay bixisaa saddex nooc oo macaamiisha ay bixin karaan. Waxaa ka mid ah Deluxe, Premier, Iyo Iskii u Shaqeyste.
Noocyadaan waxay ku kacayaan inta u dhaxaysa $ 40 iyo $ 90 waxayna u suurtageliyaan macaamiisha inay lacag ku kaydsadaan jaritaan iyo tabarucaad samafal ah.
Dhammaan noocyada barnaamijka TurboTax waxay siiyaan macaamiisha xisaabinta taageero. Si kale haddii loo dhigo, macaamiisha looma dayn doono in ay iskood isu qabtaan haddii loo hubiyo sabab kasta.
Barnaamijka TurboTax wuxuu kaloo bixiyaa taageero toos ah. Haddii aad u baahan tahay tan, waa inaad heshaa mid ka mid ah noocyada lacag bixinta ee barnaamijka TurboTax.
Isbarbardhigga Degdegga ah ee TurboTax leh Beddelka kale
Jadwalka hoose, waxaad ku arki doontaa astaamaha TurboTax leedahay iyo astaamaha beddelka kale ee bilaashka ah ee aad u adeegsan karto bixinta canshuurahaaga.
Features TurboTax H & R Block Cashuur-Dhiiglaha Xeerka Cashuuraha
Faahfaahinta Nooca Bilaashka ah Nooca bilaashka ah ee TurboTax wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay xareeyaan 1040 iyo soo -celinta gobolka haddii aysan is -diiwaangelin. Si kastaba ha ahaatee, nooca bilaashka ah uma oggola macaamiisha inay soo gudbiyaan Jadwalka 1-6. Nooca bilaashka ah ee H&R Block wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay xareeyaan 1040 iyo Jadwalka 1-6, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dadka leh canshuuraha aan cakiranayn. Nooca aasaasiga ah ee bilaashka ah wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay xareeyaan 1040 iyo canshuuraha gobolka. Nooca bilaashka ah ee xaddidan ee TaxAct ayaa u oggolaanaya macaamiisha inay fayl gareeyaan 1040 iyo soo -celinta gobolka haddii aysan lahayn dad ku tiirsan.
Bilaabidda Qiimaha TurboTax waxay bixisaa xulashooyin badan oo onlayn ah oo ka bilaabma $ 40. Qorshaha qiimahan loo yaqaan Deluxe wuxuu la yimaadaa hagitaan si looga caawiyo macaamiisha inay sare u qaadaan dhimiskooda, taageerada macmiilka ee nool, iwm. Deluxe ee xaraynta cashuurta onlaynka ah ee H&R Block waxay ka bilaabmaysaa $ 29.99. Haddii macaamiisha ay rabaan inay booqdaan xafiiska jirka si ay u helaan caawimaad, waxay ku kici doontaa $ 59.99. Nooca Caadiga ah ee TaxSlayer wuxuu ka bilaabmaa kaliya $ 17. Barnaamijkan canshuurta aasaasiga ah waxaa ku jira astaamo ay ka mid yihiin taageero laga jaro iyo dhibco, Caawinta Wax Weydiinta IRS, iyo soo -gelinta tooska ah ee internetka. Software -ka heerka sare ee ugu sarreeya wuxuu ka bilaabmaa $ 37 oo keliya. TaxAct waxay bixisaa qaar ka mid ah barnaamijyada cashuurta heerka gelitaanka oo aad u jaban, oo ay ku jiraan xirmo Deluxe+ kaliya $ 29.95. Xitaa barnaamijkooda canshuurta ee “Premier” heerkooda ugu sarreeya wuxuu ku kacayaa $ 39.95 kaliya federaalka.
Taageerada Live Haa Haa Haa Haa
Caawinta xisaab-celinta Haa Haa Haa Haa
Maxay yihiin Beddelka ugu Fiican TurboTax?
Haddii aadan rabin inaad adeegsato barnaamijka TurboTax mar dambe, ha welwelin naftaada maxaa yeelay waxaa jira habab kale oo aad u isticmaali karto si aad u kala saarto canshuurahaaga.
Hoos waxaa ah beddelka ugu wanaagsan ee softiweerka TurboTax ee aad adeegsan karto oo waa la awoodi karaa (haddii aysan ahayn bilaash):
Canshuurta Karma ee Deynta
#1. H&R Block
H&R Block wuxuu sii ahaan doonaa mid la isticmaalo sanado badan. Software -kan oo u adeegaya beddelka TurboTax wuxuu leeyahay nooc bilaash ah oo taageeraya kharashyada daryeelka ilmaha iyo ku -tiirsanaha, amaahda ardayga ka -jarista dulsaarka, bayaannada waxbarashada iyo khidmadaha, iyo ka -dhaafitaannada caymiska caafimaadka.
Software -ka TurboTax wuxuu kaga duwan yahay H&R Block sidaa darteed qorshihiisa xorta ahi wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay xaraystaan ​​hal soo -noqosho gobol oo bilaash ah halka H&R Block ay u oggolaanayso macaamiisha inay xaraystaan ​​gobollo badan oo lacag la’aan ah.
Dhinaca kale, noocyada lacag bixinta ee software -ka H&R Block waa sida TurboTax oo ay ka mid yihiin:
Free nooca aasaasiga ah
$ 29.99 nooca deluxe
$ 49.99 nooca koowaad
$ 79.99 nooca iskii u shaqeysta
In kasta oo H&R Block ay bixiso taageero macmiil oo onlayn ah, waxay leedahay xafiisyo jireed oo aad booqan karto haddii aad u baahan tahay garasho inta ay ka shaqaynayaan xaaladooda canshuur ee gaarka ah. Tani waxay ka dhigeysaa mid gaar ah maxaa yeelay inta badan shirkadaha kale ee liiskan ku jira ayaa ah khadka tooska ah.
Hel H&R Block
Akhri ALSO: Sidee Shirkadaha Caymisku Lacag U Sameeyaan? | 2022 Qaab Ganacsi oo Buuxa
#2. Cashuur -laawe
TaxSlayer oo u adeegta sidii beddel aad u fiican TurboTax wuxuu siiyaa macaamiisha leh xaalado canshuureed oo kala duwan heerar badan oo softiweer ah.
Its Classic iyo Premium noocyadu waxay awood u siiyaan macaamiisha ay arrimaha canshuurtoodu ka yara adag yihiin celceliska filer -ga oo fayl gareeya 1040 oo keliya.
Software-ka iskaa u shaqeysta ee TaxSlayer wuxuu siiyaa astaamo khaas ah fayl-wadeennada leh arrimaha murugsan ee go'aaminta waxa ay awoodaan iyo ma jari karaan. Waxay kaloo caawisaa milkiilayaasha meheradaha yaryar ee leh arrimo kale oo canshuur ah.
Ugu dambayntii, TaxSlayer's Ultimate wax -soo -saarka wuxuu bixiyaa sida ugu fiican dhammaan astaamahooda oo ay ka mid yihiin xatooyada aqoonsiga iyo adeegyada dib -u -soo -celinta, difaaca hanti -dhowrka guud, iyo taleefan aan xad lahayn, emayl, ama taageero sheekaysiga.
TaxSlayer wuxuu leeyahay gees ka sarreysa TurboTax sidaa darteed wuu ka raqiisan yahay maxaa yeelay wuxuu bixiyaa faa'iidooyin iyo astaamo yar. Halkan, fayl -wadeennadu waxay ka heli karaan dhammaan foomamka canshuurta meesha ugu hooseysa ee qiimaha. Tani waxay u saamaxaysaa faylalka waxgaradka ah inay keydsadaan wax badan.
Waxa intaa dheer tan, ma laha dib -u -eegisyo aad u muhiim ah oo ay ku jiraan khaladaadka xisaabta iyo arrimaha adeegga macaamiisha ee Trustpilot, si ka duwan aaladaha kale.
#3. Xeerka Cashuuraha
Software-ka TaxAct waa mid aad loo awoodi karo in kasta oo softiweerku leeyahay badeecad heer sare ah oo onlayn ah. Waxa xiisaha lihi, softiweerku wuxuu bixiyaa Dammaanad Xaqiijin 100k ah. Tan micnaheedu waa in softiweerku daboolo farqiga u dhexeeya haddii qofka xaraynaya uu leeyahay mas'uuliyad canshuur oo sareysa.
Markay sidaas samaynayaan, waxay bixin doonaan kharash kasta oo sharci iyo hanti -dhawr oo lagama -maarmaan ah haddii bixiyaha u diyaar garoobo baadhitaan.
Ma siiso macaamiisha hal-qof ama taageero macmiil oo jireed.
Heerka bilaashka ah ee softiweerku waa midka ugu xaddidan dhammaan xulashooyinka softiweerka cashuurta faylka ee bilaashka ah.
Software -ka FreeTaxUSA wuxuu si caadi ah u bixiyaa canshuur celinta dakhliga federaalka ee bilaashka ah laakiin madalku wuxuu ka qaadaa khidmad dhan $ 12.95 si loogu xareeyo canshuur celinta dakhliga gobolka.
TurboTax waxay leedahay waxyaabo ay wadaagaan FreeTaxUSA, si kastaba ha ahaatee, FreeTaxUSA waxaa ku jira foomamka ay u baahan yihiin dadka iskood u shaqeysta, dakhliga kirada, foomamka K-1 (laga bilaabo LLC, iskaashi, ama S-Corp), ama waxay u baahan yihiin inay qaataan jarista xafiiska guriga .
Nooca Deluxe ee softiweerka FreeTaxUSA wuxuu caawiyaa fayl -wadeennada leh xaalad canshuureed oo aad u adag oo aan isticmaali karin nooca xorta ah. Si aad u hesho nooca Deluxe, waxay kugu kici doontaa lacag yar oo ah $ 6.99. Canshuur celinta waxyar ka sii adag, FreeTaxUSA waxay u muuqataa inay bixiso xalalkeeda.
Haddii aad isbarbardhigto noocyada Deluxe iyo Free ee FreeTaxUSA, waxaad ogaan doontaa in kii hore uu bixiyo taageero dheeraad ah.
Nooca Deluxe wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay yeeshaan sheekaysiga tooska ah, taageerada mudnaanta leh, iyo Kaaliyaha Hanti -dhowrka haddii ay waraaqo ka helaan IRS. Waxa kale oo ay siisaa fayl -wadeennada canshuur celinta federaalka oo wax laga beddelay.
In kasta oo FreeTaxUSA ay u muuqato inay xalliso canshuur celin aad u dhib badan, kama keento xogta hawlwadeennada mushaharka ama bangiyada.
Si kastaba ha ahaatee, aaladaha kale ee diyaarinta canshuuraha ayaa bixiya adeegan laakiin caqabadda kaliya ayaa ah in fayl-wadeennada aysan soo gelin karin macluumaadka W-2 ama 1099-INT marka ay soo laabtaan. Xaalad ay fayl -galeyaashu leeyihiin macaamil ganacsi, waxay iska diiwaangelin doonaan gacanta.
OGOW: 17 Fikrado Qurux Badan oo Lagu Bixin Karo Deynta Si ka dhakhso badan sidii hore
#5. Canshuurta Karma ee Deynta
Dadku waxay u yaqaanaan Canshuurta Karma Credit inay tahay dhibcaha dhibcaha internetka ee lacag la'aanta ah iyo adeegga la socodka. Dhowr sano ka hor, masraxa waxaa ku jiray diyaarinta canshuurta oo ka mid ah adeegyada ay bixiyaan.
Beddelkaan TurboTax waa u bilaash canshuuraha federaalka iyo gobolka. Canshuurta Karma ee Karma waxay leedahay waxyaabo la mid ah TurboTax Bilaash Bilaash ah oo ay ku jiraan soo dejinta W2, dakhliga la kasbaday & dhibcaha canshuurta carruurta, 1099-DIV, iyo foomamka 1099-INT.
Software -ku wuxuu bixiyaa adeegyo uusan TurboTax Free Edition uusan bixin oo ay ka mid yihiin:
Dulsaarka dulsaarka guryaha
Jadwalka B: Dulsaarka & saami qaybsigame
Canshuurta hantida laga jaro
Jadwalka C: Faa'iido ama khasaaro ka yimaada shaqadass
Jadwalka E: Dakhliga hantida kirada
Ka -jarisyada kale ee qodobbada leh
Jadwalka D: Guulaha raasamaalka iyo khasaaraha
Jadwalka SE: Canshuurta iskaa u shaqeysiga
Canshuurta Karma Credit ma taageerto waxyaabaha soo socda
Dawlado badan ayaa soo noqda.
Dib-u-noqoshada gobolka ee sannadka: Xaalad adiga ama saygaaga / xaaskaaga aad ku noolayd gobol qayb ka mid ah sannadka
Gobolka aan degenayn ayaa soo noqda: Haddii aad kasbatay dakhli ka baxsan xaaladda degenaanshaha
Isqaba si gooni gooni ah u xereynta gobolada hantida bulshada
Foomka 1040-PR: Tan waxaa loogu talagalay dadka iskood u shaqeysta ee ku nool Puerto Rico
Gudbinta canshuuraha gobolka iyadoon la xareynin canshuuraha dowladda dhexe
Qaado Tax Karma Credit
In kasta oo TurboTax uu jiray sanado aad u badan, dadka badankood waxay u arkaan qaar ka mid ah adeegyadeeda inay adag yihiin. Si kastaba ha noqotee, softiweerku wuxuu sii ahaanayaa midka ugu wanaagsan sababta oo ah qiimaha wanaagsan ee ay bixiso waana mid la awoodi karo.
Beddelka kale wuxuu leeyahay astaamo la mid ah TurboTax, in kastoo, ay jiri karaan kala duwanaansho yar. Tusaale ahaan, qorshaha bilaashka ah ee TurboTax wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay soo gudbiyaan hal soo -celin gobol oo bilaash ah halka H&R Block ay u oggolaanayso macaamiisha inay xaraystaan ​​gobollo badan oo bilaash ah.
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah inaysan jirin softiweer canshuureed oo ku habboon qof walba. Dhammaan softiweerka cashuuruhu wuxuu leeyahay faa'iidooyin iyo qasaarooyin. Dhinaca kale, qaar ka mid ah softiweerrada canshuuraha ayaa leh astaamo bixiya adeeg macmiil oo dheeraad ah xaaladaha canshuuraha kala duwan.
Dib -u -eegista Caymiska Ethos 2022: Ma Xalaalbaa mise Waa Khiyaamo | Sida ay u shaqayso
Sida loo helo Sicir -dhimista Ardayga ee Whsmith 2022 -ka
Kobaca waa lama huraan xagga ganacsiga ah, wuxuu u sahlayaa ganacsatada inay ka faa'ideystaan ​​fursadaha cusub, ballaariyaan alaabtooda iyo adeegyadooda,…
Adeegyada Fax -ka Online -ka ugu Fiican ee Bilaashka ah 15 -ka
Fakisku waa adeeg ay tignoolajiyada na siisay kaas oo u muuqda mid duug ah balse aan dabar go'in. Ku…
Shopping Mystery waa macne wax ku ool ah oo shirkaduhu ay u shaqaaleeyaan ujeedada cilmi-baarista qanacsanaanta macaamiisha ee…
Sidee Bandhigyada TV -ga Lacag Loogu Sameeyaa 2022? | Qaab Ganacsi oo Buuxa
Bandhigyada TV-ga caanka ah sida "Game of Thrones" iyo "Money Heist" waxay sameeyeen mowjado waaweyn markii la sii daayay…
Sidee Grubhub Lacag U Sameeyaa? | Model Ganacsi oo Buuxa
Markaan ka hadlayno dalabka cuntada dalabka internetka, waxaa jira hal magac oo afka soo gala…